(သတိထားကြပါ …. ) အပူရှိန်မြင့်နေသော အချိန် ရေချိုး မိ၍ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ကာ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား – Let Pan Daily
(သတိထားကြပါ …. ) အပူရှိန်မြင့်နေသော အချိန် ရေချိုး မိ၍ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ကာ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွား
အပူရှိန်မြင့်နေသော အချိန် ရေချိုး မိ၍ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ် ကာ သေဆုံး မှု ဖြစ်ပွား…
မော်လမြိုင်မြို့မှာ ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ အားလုံးသတိထားကြဖို့ အကြံပြု လိုက်ပါတယ်။ အရှည်ကြီးတော့ မရေးပြတော့ပါဘူး။ ရာသီဥတု အရမ်း ပူပြင်း လွန်းတဲ့အချိန်မှာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ရေအရမ်းမချိုးကြဖို့တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
မော်လမြိုင်မြို့ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက် မှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုသမီးတစ်ဦး နေအရမ်းပြင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ပူအိုက်တဲ့ဒဏ် မခံနိုင်လို့ ရေချိုးလိုက်ရာမှ ရှော့ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ကာ သေဆုံးခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဆေးရုံပို့ချိန်တောင် မမှီခဲ့ပါဘူး။
သေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ DB ကိုတော့ နေအိမ်မှ ပိန္နဲကုန်း သုသာန် အအေးခန်းသို့ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့
အပူရှိနျမွငျ့နသေော အခြိနျ ရခြေိုး မိ၍ ဦးနှောကျ သှေးကွောပွတျ ကာ သဆေုံး မှု ဖွဈပှား…
မျောလမွိုငျမွို့မှာ ဖွဈသှားတာပါ။ ဒီအခြိနျမှာ အားလုံးသတိထားကွဖို့ အကွံပွု လိုကျပါတယျ။ အရှညျကွီးတော့ မရေးပွတော့ပါဘူး။ ရာသီဥတု အရမျး ပူပွငျး လှနျးတဲ့အခြိနျမှာ စိတျအလိုလိုကျပွီး ရအေရမျးမခြိုးကွဖို့တော့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
မျောလမွိုငျမွို့ မရမျးကုနျးရပျကှကျ မှာနထေိုငျတဲ့ အမြိုသမီးတဈဦး နအေရမျးပွငျးနတေဲ့ အခြိနျမှာ ပူအိုကျတဲ့ဒဏျ မခံနိုငျလို့ ရခြေိုးလိုကျရာမှ ရှော့ဖွဈပွီး ဦးနှောကျသှေးကွောပွတျကာ သဆေုံးခဲ့မှု ဖွဈပှားခဲ့တာပါ။ ဆေးရုံပို့ခြိနျတောငျ မမှီခဲ့ပါဘူး။
သဆေုံးသူအမြိုးသမီးရဲ့ DB ကိုတော့ နအေိမျမှ ပိန်နဲကုနျး သုသာနျ အအေးခနျးသို့ မျောလမွိုငျ RESCUE လူမှုကယျဆယျရေး အဖှဲ့မှ ပို့ဆောငျကူညီပေးခဲ့ပါသညျ။
မျောလမွိုငျ RESCUE လူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့
မုနျတိုငျး လကျကနျြ လပှေလှေိုငျး မြား၏ အရှိနျကွောငျ့ မွနျမာပွညျ နရောအနှံ့အပွား မိုးရှာမညျ
ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး ကျောက်စိမ်း ရတနာသိုက် တည်ရာ ဖားကန့် (သို့မဟုတ်) မြန်မာပြည် မြောက်ဖျား က သင်္ချိုင်းမြေ
ဖုန်းနဲ့ ဆိုင် ကယ် အတွက်နဲ့ ဒီလောက် မလုပ်သင့် ပါ ဘူး…
ကူးစက် မှုတွေ တရှိန်ထိုး တက်လာတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ အထူးသတိထားရမယ့် မြန်မာပြည်